सामूहिक शंकर अभिलेखागार Suenee Universe
हामी हाम्रो ज्ञान र ज्ञान कहाँ पुग्छौं? हामी सबै विद्यालय जानुभयो, त्यसपछि हामी उच्च मा व्याख्यान र पुस्तकहरु पढ्न थियो। अधिक ध्यान दिएर, हामीले आमाबाबुबाट धेरै चीजहरू सिक्नुभयो र अन्ततः मिडियाबाट। तर यो सबै हो?
धेरै न्युलाल टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन जस्तै महान विचारधाराहरू, संगीतकार अमेदेस मोजार्ट, लुडविक वे बीथभवनले स्वीकार गर्छन् कि ब्रह्माण्डमा प्रेरणा कहीं गहिरो हुन्छ। सबैजना आफ्नै आफ्नै सिद्धान्त थियो। तिनीहरूले एक मा सहमत गरे कि त्यो प्रेरणा यो उनीहरूको आफ्नै उपलब्धि थिएन, तर यो आउँदै थियो बाहिर बाहिर।..
आज, धेरै भन्नुहुन्छ सामूहिक चेतना, morphogenetic field वा अकाशा.
डेभिड विल्कोक: टाइम तीन-आयामी हो
Morphic गूंज संसार परिवर्तन गर्न सक्छ!
जसको लागि तिनीहरू उपयोगी छन् र कसलाई, यसको विपरीत, सूर्यको विच्छेदनलाई हानिकारक गर्दै हुनुहुन्छ?
के हाम्रो ज्ञान morphogenetic क्षेत्रबाट आएको छ?